?? ရတနာက ထက်ထက် မိုးဦး ကို ???? လွှင့် ဈေးရောင်းဖို့ မခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း - Maythadin
May Thadin | November 16, 2020 | Knowledge, News | No Comments
?? ရတနာက ထက်ထက်မိုးဦး ကို ???? လွှင့် ဈေးရောင်းဖို့ မခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
သူနဲ့ဆိုပိုရောင်းရမှာဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ခေါ်လွှင့်ကြည့်ပါလားကွယ်”တဲ့.ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမထက်ကိုခေါ်ချင်တာမှဟိုဘက်ကမ်းတောင်လွန်ပါသေးတယ်ဗျာ။အခုလိုမထက်လျှမ်းလျှမ်းတောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မပြောနဲ့မထက်အနုပညာအလုပ်တွေတကျော့ပြန်စလုပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ ?? ရတနာဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာပထမဆုံးဆိုင်ခန်းကြီးစဖွင့်တုန်းကဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာမရရအောင်
ခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မထက်အပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရမှာပါအခုဆိုမထက် ???? တွေမှာရောင်းရတာမရောင်းရတာမပြောနဲ့။ကြည့်ရှုသူသိန်းချီရှိတာရယ် ? နာရီကျော် ? နာရီလောက်ဈေးရောင်းပေးတာရယ်နဲ့တင်ကိုကြော်ငြာစရိတ်နဲ့တွက်ရင်တန်နေပြီရယ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲလိုပွဲတက်ခဏဘဲလာတာတောင်မထက်ကိုငှါးနိင်ခဲ့သေးတာဒီလို ??????? တွေပေးနေတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မငှါးနိင်စရာမရှိဘူးလေ…
ဒါပေမဲ့မထက်အပါအဝင်ဘယ်အနုပညာရှင်မှ ???? လွှင့်ဈေးရောင်းဖို့မခေါ်ဘဲကျွန်တော်တို့လင်မယားနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေဘဲ ???? လွှင့်ရောင်းနေကြတာအဲ့ဒီအနုအညာရှင်တွေကိုချစ်တာရယ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ ????????? ???????? မကိုက်ညီတာရယ်ကြောင့်မခေါ်ဖြစ်တာပါကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းမှာရောဂါပိုးရှိနိင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိနိင်တယ်။ကိုယ့်ကြောင့်ကူးစက်နှုန်းတွေမဖြစ်စေလိုဘူး၊
အဲ့ဒီအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအနည်းဆုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အဝေးဆုံးကိုပြေးပုန်းနေရတာပါဗျာ။နောက်ပြီးဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံး ??? ကိုရွေးခဲ့တော့..ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းရင်ဝယ်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုရင်းနှီးမှုတိုးစေမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပင်ပန်းခံမိုးလင်းပေါက်ထိရောင်းချခဲ့တာ
တစ်သိန်းမှတစ်သောင်းဘဲလျော့သလိုလျော့မယ်ဆိုတရားပါ့မလား…?ဝယ်သူဘက်ကစဉ်းစားကြည့်တာပါ.. ?? အဲဒီတော့လျော့လိုမရတဲ့ရွှေထည်နဲ့ ?? တွေကိုတော့မလျော့ဘူးစိန်ထည်တွေကရောလျော့လို့မရဘူးလား?လုပ်ငန်းတိုင်းကရင်းထားတယ်ဆိုတာအမြတ်ရှိလို့ပါအမြတ်မရှိဘဲငွေတွေအတိုးတက်ခံပြီးရင်းထားပါ့မလား…?အဲ့ဒီတော့ဆိုင်တွေပိတ်ထားလို့ကိုယ်ရင်းထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းအိပ်ခိုင်းထားလို့
ဖြစ်ပါ့မလား…?ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ?? ရတနာအတွက်ပိုဆိုးတာကကိုဗစ်ကြောင့်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ထားပေမဲ့ပြန်ရောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုအိမ်တိုင်ရာရောက်ပြန်လိုက်ဝယ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုရှိတာဆိုတော့.ကျွန်တော်တို့မှာငွေလိုပါတယ်…လက်ထဲရှိတာတွေကိုဝင်ငွေအဖြစ်မပြောင်းလဲနိင်ဘဲလိုငွေတွေချည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရင်နာမည်ပျက်ရင်ပျက်
မထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လျော့တာ ?? % to ?? %ကြားထဲရှိတာရယ်..ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့က ? %ဘဲလျော့တာဆိုတော့ကျွန်တော့် ???????? တွေလည်းပျော်ကြတာပေါ့ဗျာ..ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမို့ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးမှမခေါ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ကိုယ်တွေလင်မယား ???? မှာကြည့်ရှုသူအများဆုံးအချိန်မှ ? ? မကျော်ဘူးရယ်၊ပုံမှန်ဆို ? ? ဝန်းကျင်မထက် ???? မှာကြည့်ရှုသူ ???? ကျော်နေတာတွေ
အဲ့လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်ကန်မှုကိုပြသနိင်ခဲ့လို့လည်းအချိန်အနည်းငယ်အတွင်း29ရတနာဆိုတာမြန်မာပြည်တဝှမ်းလူကြိုက်များလာရတာပေါ့ဗျာ…ကဲမထက်နှင့်တကွဘယ်အနုပညာရှင်မှ ???? ခေါ်မလွှင့်တာ29ရတနာကမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ချစ်လို့သိပြီလား…မထက်ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုဗစ်ကြီးပြီးလို့ ?? ရတနာကပွဲတွေလုပ်ရင်ပြည်သူ့အချစ်တော်မထက်ကိုမပါမဖြစ်လက်တွဲသွားမယ်ဆိုတာဂတိပေးပါတယ်နော်မိတ်ဆွေများကိုချစ်ခင်အလေးထားတာ ?? ရတနာ။
?? ရတနာက ထကျထကျမိုးဦး ကို ???? လှငျ့ ဈေးရောငျးဖို့ မချေါရတဲ့ အကွောငျးအရငျး
သူနဲ့ဆိုပိုရောငျးရမှာဘာဘဲဖွဈဖွဈတဈခေါကျလောကျတော့ချေါလှငျ့ကွညျ့ပါလားကှယျ”တဲ့.ဟုတျကဲ့ကြှနျတျောတို့လညျးမထကျကိုချေါခငျြတာမှဟိုဘကျကမျးတောငျလှနျပါသေးတယျဗြာ။အခုလိုမထကျလြှမျးလြှမျးတောကျပွနျဖွဈနတေဲ့အခြိနျမပွောနဲ့မထကျအနုပညာအလုပျတှတေကြော့ပွနျစလုပျတဲ့အခြိနျကြှနျတျောတို့ ?? ရတနာဗိုလျခြုပျဈေးမှာပထမဆုံးဆိုငျခနျးကွီးစဖှငျ့တုနျးကဆိုငျဖှငျ့ပှဲမှာမရရအောငျ
ချေါခဲ့တာကြှနျတျောတို့ရဲ့မထကျအပျေါခဈြတဲ့စိတျကိုမွငျအောငျကွညျ့လို့ရမှာပါအခုဆိုမထကျ ???? တှမှောရောငျးရတာမရောငျးရတာမပွောနဲ့။ကွညျ့ရှုသူသိနျးခြီရှိတာရယျ ? နာရီကြျော ? နာရီလောကျဈေးရောငျးပေးတာရယျနဲ့တငျကိုကွျောငွာစရိတျနဲ့တှကျရငျတနျနပွေီရယျဆိုငျဖှငျ့ပှဲလိုပှဲတကျခဏဘဲလာတာတောငျမထကျကိုငှါးနိငျခဲ့သေးတာဒီလို ??????? တှပေေးနတောကြှနျတျောတို့အနနေဲ့မငှါးနိငျစရာမရှိဘူးလေ…
ဒါပမေဲ့မထကျအပါအဝငျဘယျအနုပညာရှငျမှ ???? လှငျ့ဈေးရောငျးဖို့မချေါဘဲကြှနျတျောတို့လငျမယားနဲ့ကြှနျတျောကလေးတှဘေဲ ???? လှငျ့ရောငျးနကွေတာအဲ့ဒီအနုအညာရှငျတှကေိုခဈြတာရယျကြှနျတျောတို့သှားခငျြတဲ့ ????????? ???????? မကိုကျညီတာရယျကွောငျ့မချေါဖွဈတာပါကိုဗဈကာလဖွဈတဲ့အတှကျလူတိုငျးမှာရောဂါပိုးရှိနိငျတယျကြှနျတျောတို့မှာလညျးရှိနိငျတယျ။ကိုယျ့ကွောငျ့ကူးစကျနှုနျးတှမေဖွဈစလေိုဘူး၊
အဲ့ဒီအတှကျထိတှဆေ့ကျဆံမှုအနညျးဆုံးလုပျရမယျဆိုတော့ကိုယျခဈြတဲ့အနုပညာရှငျတှနေဲ့အဝေးဆုံးကိုပွေးပုနျးနရေတာပါဗြာ။နောကျပွီးဒီကိုဗဈကာလမှာကြှနျတျောတို့သှားတဲ့လမျးကွောငျးကကုနျကစြရိတျအနညျးဆုံးနဲ့အထိရောကျဆုံး ??? ကိုရှေးခဲ့တော့..ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျရောငျးရငျဝယျသူတှအေနနေဲ့ယုံကွညျမှုရငျးနှီးမှုတိုးစမေလားဆိုပွီးကြှနျတျောတို့အပငျပနျးခံမိုးလငျးပေါကျထိရောငျးခခြဲ့တာ
တဈသိနျးမှတဈသောငျးဘဲလြော့သလိုလြော့မယျဆိုတရားပါ့မလား…?ဝယျသူဘကျကစဉျးစားကွညျ့တာပါ.. ?? အဲဒီတော့လြော့လိုမရတဲ့ရှထေညျနဲ့ ?? တှကေိုတော့မလြော့ဘူးစိနျထညျတှကေရောလြော့လို့မရဘူးလား?လုပျငနျးတိုငျးကရငျးထားတယျဆိုတာအမွတျရှိလို့ပါအမွတျမရှိဘဲငှတှေအေတိုးတကျခံပွီးရငျးထားပါ့မလား…?အဲ့ဒီတော့ဆိုငျတှပေိတျထားလို့ကိုယျရငျးထားရတဲ့ပစ်စညျးတှဒေီအတိုငျးအိပျခိုငျးထားလို့
ဖွဈပါ့မလား…?ပွီးတော့ကြှနျတျောတို့ ?? ရတနာအတှကျပိုဆိုးတာကကိုဗဈကွောငျ့စိနျရှရေတနာဆိုငျတှအေားလုံးပိတျထားပမေဲ့ပွနျရောငျးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျရနျကုနျမွို့တှငျးဆိုအိမျတိုငျရာရောကျပွနျလိုကျဝယျပေးတဲ့ဝနျဆောငျမှုရှိတာဆိုတော့.ကြှနျတျောတို့မှာငှလေိုပါတယျ…လကျထဲရှိတာတှကေိုဝငျငှအေဖွဈမပွောငျးလဲနိငျဘဲလိုငှတှေခေညျြးတောကျလြှောကျဖွဈနရေငျနာမညျပကျြရငျပကျြ
မထငျနဲ့ကြှနျတျောတို့လြော့တာ ?? % to ?? %ကွားထဲရှိတာရယျ..ဒါပမေဲ့ပုံမှနျအခြိနျဆိုကြှနျတျောတို့က ? %ဘဲလြော့တာဆိုတော့ကြှနျတေျာ့ ???????? တှလေညျးပြျောကွတာပေါ့ဗြာ..ကိုယျခမြှတျထားတဲ့လမျးကွောငျးမို့ဘယျမငျးသားမငျးသမီးမှမချေါဘူးလို့ဆုံးဖွတျထားပမေဲ့ကိုယျတှလေငျမယား ???? မှာကွညျ့ရှုသူအမြားဆုံးအခြိနျမှ ? ? မကြျောဘူးရယျ၊ပုံမှနျဆို ? ? ဝနျးကငျြမထကျ ???? မှာကွညျ့ရှုသူ ???? ကြျောနတောတှေ
အဲ့လိုခံယူခကျြမြိုးနဲ့ကြှနျတျောတို့ရဲ့မှနျကနျမှုကိုပွသနိငျခဲ့လို့လညျးအခြိနျအနညျးငယျအတှငျး29ရတနာဆိုတာမွနျမာပွညျတဝှမျးလူကွိုကျမြားလာရတာပေါ့ဗြာ…ကဲမထကျနှငျ့တကှဘယျအနုပညာရှငျမှ ???? ချေါမလှငျ့တာ29ရတနာကမုနျးလို့မဟုတျဘူးနျောခဈြလို့သိပွီလား…မထကျကိုခဈြတဲ့မိတျဆှမြေားအတှကျကိုဗဈကွီးပွီးလို့ ?? ရတနာကပှဲတှလေုပျရငျပွညျသူ့အခဈြတျောမထကျကိုမပါမဖွဈလကျတှဲသှားမယျဆိုတာဂတိပေးပါတယျနျောမိတျဆှမြေားကိုခဈြခငျအလေးထားတာ ?? ရတနာ။